Madaxweynaha Zimbabwe oo ku baaqay in laga gudbo midab-kala sooca – AwKutub News
Madaxweynaha Zimbabwe oo ku baaqay in laga gudbo midab-kala sooca
By awkutubnews July 22, 2018 July 22, 2018
Wuxuuna yiri “waxaan billaabeynaa wadahadallo ku saabsan cidda beeraha yeelaneyso iyada oo midab loo eegin”.
“waxaa gaf aad u weyn ah ayuu yiri in beeraley, beeraley madow ah, beeraley caddaan ah la dhaho, waa ineynu dhahnaa beeraleyda Zimbabwe”.
Caddaanka dhulka haysta iyo dadka madowga ah ayaa waxaa marar badan ka dhex dhacay dagaallo, taasoo ka dhalatay caddaanka sida xirfadeysan wax u beerto iyo shaqa laa’aanta ba’an ee haysata dadka madowga ah oo aan fursado shaqo ka helin dhulka caddaanka.
Doorashada bishan dalka Zimbabwe ka dhaceyso waxaa iisu diiwaan geliyey 120 xisbi siyaasadeed iyo 23 musharrax oo u tartameysa kursiga madaxweynanimada oo dalka oo dhanna laga soo dooranaya.
Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa la saadilanaya inuu doorashada ku guuleysanaayo, balse dadka u kuur gala siyaasadda dalkaasi waxay sheegayaan inuu cadow badan uu leeyahay afgambigi uu xilka kaga tuuray madaxweynihi hore iyo doorki awoodeed uu ku lahaa dowladdi hore ee Mugaabe.
Waana nin sumcad badan bulshada dhexdeeda ku leh, gaar ahaanna mowqifkiisa ku aaddan shaqa la’aanta dhalinyarada, haddii la doortana wuxuu noqonayaa madaxweynaha ugu da’da yar ee dalkaasi hoggaamiyo.
Codka ugu badan ayaa waxaa la filayaa inuu ka helo dhalinyarada dalkaasi. Kala badh iyo in ka badan dadka Zimbaabwe 43.5% waxay da’doodu u dhaxeysaa 25, iyada oo codkiisa uu dhiiban karo ilaa iyo 35 jir.
Previous Entry RW Khayre oo ka hadlay Muhiimada ay Leedahay ku biiritaanka Suuqa COMESA
Next Entry Dowladda Shiinaha oo Kaalmo Dhaqaale ugu deeqday Soomaaliya